बाढीले पुरियो एम्बुलेन्स, बिरामीको मृत्यु, चालक घाइते – Kavrepati
admin4weeks ago	समाचार Leaveacomment 126 Views
उनलाई स्थानियले उद्धार गरेर अस्पताल लगेका थिए । उनको पोखरा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा उपचार भइरहेको छ । अनुसार जेसिवीको सहायताले बाढीबाट एम्बुलेन्स निकालिएको र पोखरा ल्याउने तयारी भइरहेको छ । एम्बुलेन्सका सहचालक भने सकुशल छन् । सांकेतिक तस्बिर
Previous बाबा ग्यास उद्योगमा खोला पस्यो, सिलिण्डर वगाएर सौराहा सम्म पुर्यायो , के कति सिलिण्डर वगायो ? कति भयो नोक्सान ?
Next तीन महिनामा टिकटकद्वारा ७३ लाख प्रयोगकर्ता निलम्बित
काठमान्डौ- केहिदिन देखि बि’बादको चु’लीमा चु’लिएका बिजय शाही काठमान्डौबाट भागेर कालिकोट पुगे ।एक अमेरिकी युटुबर …